चीन - एक अद्वितीय र सुन्दर संस्कृति संग एक देश। यहाँ हरेक वर्ष त्यहाँ आफ्नो सौन्दर्य पराउँछु आउन जो एक लाख भन्दा बढी मानिसहरू हुन्। यात्री यो राज्य चीन सबैभन्दा ठूलो भवन हेर्न मात्र छैन, तर पनि मान्छे को संस्कृति सिक्न चयन गर्नुहोस्।
मध्य राज्य मा धेरै जातिहरूलाई घर (देश त अक्सर भनिन्छ)। किनभने यो परम्परा, जीवन को बाटो, जीवन \_ को मोड नयाँ मनसाय हुन्छ। जनसंख्याको 90% भन्दा आदिवासी चिनियाँ छन् तापनि तिनीहरूले सजिलै अर्को राष्ट्रको जीवनमा दिँदै आफ्नो संस्कृति मा परिवर्तन स्वीकार गर्न तयार हुन्छन्।
चीन मा, त्यहाँ आफ्नो मातृभाषामा बोल्ने अल्पसंख्यकों छन्। क्षणमा, धेरै विभिन्न चिनियाँ बोलियों, को साधारण स्वीकार मान्यता फरक जो बोल्न, त्यहाँ बारेमा 300 को Jurchen (को एक सहित छन्, मरेका भाषा)।
मानिसहरूलाई गणतन्त्र को पर्यटक आकर्षण गर्न विश्वव्यापी धन्यवाद प्रकट गरिएको छ। यात्री ग्रामीण दृश्य आकर्षित छन्, सजिलै भएको शहरी गगनचुम्बी भवनहरू बदलिएको छन्। परिदृश्य - पहिलो कारण किन विदेशीहरू धेरै छन्। तिनीहरूले पनि सबैभन्दा अनुभवहीन अनुभवी hikers गर्न मात्र चकित गर्न सक्षम छन्, तर।
प्राचीन समयमा चिनियाँ मान्छे संसारको आफ्नो घर केन्द्र विश्वास गरे। देश को सीमा मा बस्ने ती जातिहरूलाई, आदिवासीहरूले भनिन्थ्यो। तिनीहरूले अक्सर दमन र भेदभाव गर्न subjected छन्।
बासिन्दा पुस्तकहरू, विद्वान लागि निहित भारी आदर, र विभिन्न ज्ञान। सबै व्यवसाय पाठ दुवै चिनियाँ र अंग्रेजी छापिएको छ जो एक व्यापार कार्ड हुनुपर्छ। चिनियाँ अर्थतन्त्रको peculiar छ, त्यसैले तिनीहरू सजिलै र चाँडै एक विशाल राजधानी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
चीन - पूर्व एशिया मा स्थित एक देश। यो 15 देशहरूमा द्वारा सीमा छ। इलाका दक्षिण चीन, पीत र पूर्व चीन समुद्र द्वारा धोए छ। म आकाशीय साम्राज्य पर्याप्त पहाड छ भनेर भन्न पर्छ। कुल को% मात्र 30 चीन क्षेत्र समुद्र स्तर तल छ। को elevations साथै पानी फेला परेन। तिनीहरूले गुण, साथै सुन्दर दृश्य लागि जानिन्छ। धेरै नदी नेविगेशन, माछा मार्ने र सिंचाई को लागि प्रयोग गरिन्छ। यहाँ यस्तो तेल, कोइला, अयस्क मैंगनीज, जस्ता, नेतृत्व र अरूलाई रूपमा खनिज mined छन्।
पूर्वी र पश्चिम (मध्य एशिया मा स्थित) (पूर्व एशिया मा स्थित): नक्सामा चीन दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। यो देश को सम्पति मा ताइवान र हाइनान हुन्छन्। यी टापुहरूमा सबैभन्दा ठूलो हो।
चीन को गणतन्त्र को गठन पछि पहिलो शासन राजकुल पनि शांग थियो। केही समय पछि, यो झोउ कुलले बदलिएको थियो। त्यसपछि, क्षेत्र निरन्तर युद्ध बाहिर छन् जसको लागि धेरै भागमा विभाजित भएको थियो। यी धेरै किलोमिटर पर्खाल को Huns विरुद्ध सुरक्षा गर्न बनाइएको थियो किनभने यो छ। राज्य को heyday हान राजवंश को अवधि संग coincided। चीन नक्सामा पहिले देखि नै छ, जबकि दक्षिण र पश्चिम यसको सीमाना विस्तार गर्न एक महत्वपूर्ण स्थान कब्जा।
लगभग तुरुन्त ताइवान को विजय (जो अझै पनि देश को एक बस्ती छ) पछि, राज्य एक गणतन्त्र भयो। यो 1949 मा भयो। सरकार सांस्कृतिक सुधार को एक किसिम सधैं अपनाए र आर्थिक क्षेत्र परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको छ। चीनको विचारधारा परिवर्तन भयो।
राष्ट्रको रूपमा चिनियाँ
चिनियाँ - राष्ट्र चीन inhabiting। संख्या मा उनि पहिलो स्थानमा बसे योग्य। को आदिवासी मान्छे आफूलाई "हान" कल। यो नाम कारण थियो हान राजवंश, एकल सरकार अन्तर्गत देश को सम्पूर्ण क्षेत्र एकजुट गर्न सक्षम थियो जो। प्राचीन समयमा, शब्द "हान" अर्थ "आकाशगङ्गा।" यो चीन को मान्छे आकाशीय देश नाम भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
चीन मा हान चिनियाँ को सबै भन्दा ठूलो संख्या। तिनीहरू यहाँ अर्ब 1 भन्दा बढी। मानिसको घर छन्। तिनीहरूले पनि ताइवान जनसंख्या लगभग 98% छ। हामी चिनियाँ बिल्कुल सबै काउन्टी र नगरपालिका बसाबास गर्नु भनेर निर्धक्क भन्न सक्नुहुन्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया - ती राज्य चिनियाँ प्रवासी जनसंख्याको नेतृत्व हाल छन्। यी देशहरूमा विगत5वर्ष यो लगभग 40 लाख। हान सारियो।
चीन को मानिसहरूका
सरकारी डाटा अनुसार, चीन को गणतन्त्र मा 56 जातिहरूलाई घर हो। कारण चिनियाँ, जनसंख्याको 92% भन्दा कब्जा गरेका छन् र बाँकी जातीय अल्पसंख्यक विभाजित छन् भन्ने तथ्यलाई गर्न। देश मा यस्तो संख्या सरकार द्वारा voiced संख्या, भन्दा धेरै उच्च छ।
दक्षिण मा, बासिन्दा चिनियाँ भाषा को एक उत्तरी क्षेत्रीय भाषा बोल्छन्। तर, यो तिनीहरू अझै पनि हान समूहमा आबद्ध कि टिप्पण लायक छ।
चीन प्रमुख मान्छे:
चिनियाँ (हान, Hui, Bai);
तिब्बती-बर्मन (Tujia, र तिब्बती एट अल।);
थाई (जुआंग, buoys, दांग एट अल।);
मिअाव-याओ (मिअाव, याओ, त्यो) को मान्छे;
सोम खमेर (VA, Bulaev, चिंग एट अल।);
मङ्गोलियन (मङ्गोलियन, Dongxiang, तू एट अल।);
टर्क (Uighurs Kazakhs Kirghizes एट अल।);
Tungus- Manchurian (manchurians, sibo, evenks एट अल।):
भारत-युरोपेली (Pamir Tajiks, रूसी)।
चीन को मान्छे को संस्कृति पुरातन समयका जान्छ। त्यो हाम्रो युग अघि निस्कनु गर्न थाले। त्यहाँ देवताहरूको चिनियाँ जीवन र जीवित अवस्था केही सिद्धान्तहरू छन् दिनुभएको एक पौराणिक कथा छ। चीन को इतिहास मा धेरै शताब्दीयौंदेखि संस्कृति मा भारी परिवर्तन गर्न लगाया जान सक्छ।
मानवता, शेन क्विन्गाइ विशेष औषधीय बिरुवाहरु खोल्न सक्षम थियो, र Qiang Chze लेखन पिता भए - मिति थाह राज्य, को मुख्य मिथक, Nuwa हामीलाई Pangu सारा संसार सिर्जना गर्ने बारे।
चिनियाँ वास्तुकला पुरातन समयका देखि भियतनाम, जापान र कोरिया को संरचना मा एक शक्तिशाली प्रभाव छ।
मानक घरहरू दुई फर्श अधिकतम छ। यस शहर मा, आधुनिक भवन अन्ततः पश्चिमी प्रजाति, को गाउँमा पनि आवासीय भवन को मूल डिजाइन राख्छ प्राप्त।
चीन को मान्छे को परम्परा
शिष्टाचार, समारोह, उपहार सँग सम्बन्धित परम्परा धेरै। जसले संसारभरि फैलाउन कि वचनहरू केही सिर्जना गरेका तिनीहरूले छ।
यो देशमा आरामदायक महसुस गर्न, तपाईं यो राष्ट्रको मूल नियम थाहा हुनुपर्छ:
हात मिलाउन - आदरपूर्ण इशारा, चिनियाँ प्रयोग गर्दा विदेशीहरू संग अभिवादन।
एक उपहार रूपमा चक्कु, कैंची र अन्य तेज वस्तुहरु कहिल्यै प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तिनीहरूले मतलब सम्बन्ध मा एक ब्रेक। तिनीहरूलाई साथै यो घडी, रुमाल, फूल, पराल जुत्ता दिन छैन राम्रो छ। यी चिनियाँ मान्छे को लागि कुराहरू मतलब छिटो मृत्यु हो।
यो काँटाहरू संग खान छैन, त्यसैले तपाईं विशेष लाठी प्रयोग गरेर बिजुली आपूर्ति गर्न accustomed गर्नुपर्छ।
उपहार घर खोल्न आवश्यक, तर तुरुन्तै छैन रसिद पछि।
पर्यटकहरु उज्ज्वल रंग को लुगा लगाउने छैन सल्लाह छन्। तपाईं प्यास्टेल रंग मा गरिन्छ कि कुराहरू चयन गर्नुपर्छ। यो चिनियाँ मान्छे नराम्ररी अभिव्यक्ति यस्तै प्रकार बुझाउँछ भन्ने तथ्यलाई बताउँछन्।
पुरातन समयका देखि संरक्षित गरिएको छ जो मुख्य आकर्षण, को छ चीन को महान पर्खाल। यो III शताब्दी ई.पू. मा बनाइएको थियो। जबकि यसको लम्बाइ लगभग5हजार। किमी उचाइ अंतर रहन्थ्यो6देखि 10 मिटर छ।
बेइजिङ, त्यहाँ पनि पर्यटकहरु संग लोकप्रिय छन् जो अन्य महत्वपूर्ण वास्तु संरचना, छन्। ती सबैभन्दा XV-XIX सदियों मा निर्मित थिए। संघाई धनी मन्दिर सजावट बहुमूल्य पत्थर बनेको छ जो। केन्द्र Lamaism - Luhas। को दलाइ लामा को निवास बसा जो विहारको, - चिनियाँ मान्छे प्रेम एक अर्को सांस्कृतिक सम्पदाको छ।
आकर्षण पनि छन् पहाड (Huangshan), गुफाहरु (Mogao), पोर्ट भिक्टोरिया, ली नदी र निषेधित शहर। अक्सर त्यहाँ प्राचीन बौद्ध भवनहरु छन्।
Mitosis के छ र के प्रक्रिया Mitosis को prophase मा ठाँउ लिन्छ?
प्रवाहकीय कपडा: संरचनात्मक सुविधाहरू
मास्को को भौगोलिक स्थिति: को निर्देशांक, नक्सामा स्थान। विशेषताहरु मास्को को भौगोलिक स्थिति
रूसी अर्थव्यवस्था मा रक्षा उद्योग को भूमिका कस्तो छ? रूसी अर्थव्यवस्था मा सैन्य-औद्योगिक जटिल
Eclairs, patties र mantles को लागि पींग आटा
सलाद स्लट: विकल्प र व्यञ्जनहरु
आफ्नो हातमा धातु बाट उठेर: एक विस्तृत मास्टर वर्ग
Poshipet जस्तै मडागास्कर Cockroaches
बैग "Brachialini" - फेयर सेक्स को पहिलो-वर्ग विकल्प
भित्री ढोका नमस्ते-टेक शैली र भित्री मा आधुनिक
के कला गर्छ। 31 आपराधिक प्रक्रिया को कोड?
को Columnists हुन् र आफ्नो काम के हो